Sweden oo qaabilaysa in ku dhaw 2 kun oo qaxooti ah oo Soomaali ka mid tahay – SBC
Sweden oo qaabilaysa in ku dhaw 2 kun oo qaxooti ah oo Soomaali ka mid tahay
Posted by editor on February 3, 2012 Comments
Dawlada Sweden ayaa shaaca ka qaaday inay sanadkan 2012 qaabili doonto qaxooti tiradoodu dhan yahay 1,900 oo qof kuwaasi oo ay ka mid yihiin Soomaali, waxaana la sheegay in muhiimad ay siinayso qaadista qaxootiga Soomaalida ee ka diiwan gashan qaramada midoobay ee ku sugan xeryaha qaxootiga ee wadamada dariska la ah Soomaaliya ee Kenya, Jibuuti iyo Itoobiya.
Christina Werner oo ah haweenayda madaxda ka ah hay’ada dadka soo galootiga ah ee dalka Sweden ee magaceeda loo yaqaan (Migrationsverket)cayaa sheegtey in ay dawlada Sweden ogalaatey inay qaabisho 1, 900 oo qof oo ka soo kala jeeda Soomaaliya, Eritrea iyo dadka Itoobiyaanka ah ee ku sugan wadanka Itoobiya.
Baarlamanak wadanka Sweden ee loo yaqaan Riksdag ayaa ogolaadey sanadkan in dad tiradoodu u dhacayso 1,700 ilaa 1,900 la keeni doono dalka Sweden, kuwaasi oo ka imaanaya nidaamka qaxootiga ee qaramada midoobay.
Si la mid ah sidii sanadihii hore waxaa dadkan qaxootiga ah ay ka kala imaan doonaan wadamada xiisadaha colaadeed ka aloosan yihiin gaar ahaan wadamada bariga Afrika, balse waxaa kale oo ka mid ah dadka ka baxsanaya qulqulatooyinka siyaasadeed ee ka aloosan waqooyiga Afrika.
Badi dadkan labada kun ku dhaw ee dawlada Sweden qaabilayso ayaa waxaa la sheegay inay ka soo jeedaan Soomaaliya gaar ahaan kuwa ku sugan xeryaha qaxootiga.
Dawlada Sweden waxay iskaashi la aheyd hay’ada qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR tan iyo sanadkii 1950-kii.
Werner waxay farta ku fiiqdey in dalka Sweden uu yahay wadanka ugu badan ee Yurub ee qaabila qaxootiga.